2021 Oshkosh nihoatra ny andrasan'ny mpikarakara EAA sy ny ekipan'ny Bahamas
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » 2021 Oshkosh nihoatra ny andrasan'ny mpikarakara EAA sy ny ekipan'ny Bahamas
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
VIP Helicopter Tour - EAA Execs dia nanome fitsidihan'ny helikoptera ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany sy fiaramanidina Bahamas ny fitsidihan'ny helikoptera an'i EAA AirVenture Oshkosh. LR: Reginald Saunders, Sekretera maharitra ary Ellison "Tommy" Thompson, tale jeneraly lefitra. Sary natolotry ny BMOTA.
Ny Fikambanan'ny fiaramanidina fanandramana 2021 AirVenture Oshkosh, natao ny 26 Jolay hatramin'ny 1 Aogositra, tao Oshkosh, Wisconsin, dia nifarana. Avy amin'ny kaonty rehetra, ireo mpanafatra fiaramanidina, amin'ny isa manaparitaka firaketana, dia nanaiky ny lohahevitra hoe "Tapitra ny fiandrasana." "Ny fampisehoana dia nihoatra ny andrasan'ny mpikarakara EAA sy ny ekipan'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fiaramanidina (BMOTA) ao Bahamas, na dia nisy aza ny taona sarotra sy tsy dia nahazatra," hoy i Greg Rolle, talen'ny tsena vertika, BMOTA.
Tsy fantatr'ireo mpikarakara izay antenaina amin'ity hetsika ity, saingy niteny mafy ny vondron'orinasa fiaramanidina - vonona ny ho tonga any Oshkosh izy.
Ny lohahevitry ny hetsika «Tapitra ny fiandrasana» dia voaporofo fa voafidy tsara ary mendrika tokoa ny fiandrasana.
Fifaliana sy fientanam-po no niparitaka nanerana ny kianja, nametraka ny dingana ho amin'ny fiverenan'i AirVenture.
“Io angamba no toe-javatra sarotra indrindra natrehinay tamin'ny naha-fikambanana anay hahatanteraka ny hetsika. Niditra tamin'ity taona ity izahay fa tsy nahalala izay ho endrik'i AirVenture sy ny halehiben'ny hetsika azo atao. Na dia niteny mafy aza ny vondron'orinasa - efa vonona ny ho tonga any Oshkosh izahay ary faly izahay fa afaka mandray azy ireo. Ny lohahevitray dia hoe 'Tapitra ny fiandrasana,' ary tena izany tokoa. Mendrika ny fiandrasana. Nisy fifaliana sy fientanam-po eraky ny tokontany, ary io no nametraka ny dingana ho amin'ny fiverenan'ny AirVenture, nahatonga anay ho faly indrindra amin'ny ho avy, "hoy ny CEO sy ny talen'ny EAA, Jack Pelton.
Sekretera maharitra, BMOTA, Reginald Saunders, notafihan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa BMOTA. LR: Deckrey Johnson, Aram Bethell, Nuvolari Chotoosingh, Reginald Saunders, Sekretera maharitra, Greg Rolle, Jonathan Lord, Jon Tonko, Banyan Air; ary Nathan Butler, fadintseranana any Bahamas. Sary natolotry ny BMOTA.
Miorina amin'ny antontan'isa nomen'i Pelton, olona 608,000, avy amin'ny firenena 66 no nanatrika seho amin'ity taona ity, ny laharana fahatelo avo indrindra amin'ny tantaran'ny fandaharana 68 taona. Fiaramanidina 16,378 3,176 total, anisany ny fiaramanidina fampisehoana 1,420 (fiaramanidina antitra 1,089 voasoratra anarana, homena trano miisa 354, bolabola miisa 148, fiaramanidina aerobatika 112, seranan-tsambo 33, hazavana 27 ary rotorcraft 567) no nandray anjara. 18.95 mahery ny matihanina amin'ny haino aman-jery tonga nanatrika ny hetsika ary maherin'ny XNUMX tapitrisa ny fahatsapan'ny haino aman-jery sosialy.
Nanako ny fientanam-po izay nizara an'i Pelton, nilaza i Rolle, fa "mbola mizaka ny vokatry ny areti-mandringana Covid-19 izao tontolo izao, noho izany azo antoka fa tsy nampoizinay ny fahalianana avo lenta nasehon'ny The Bahamas. Tsy noeritreretinay ihany koa ny haavon'ny fahombiazana miavaka amin'ny seho amin'ity taona ity, izay hitan'ny isan'ny olona nitsidika ny trano heva sy nanatrika ireo fivorian'ny orinasa sy seminera isan'andro, ary koa ny valin'ny ezaka tambajotranay. ”
Ny tambajotra miaraka amin'ireo masoivohon'ny EAA International Federal Partnership (IFP), izay isan'ny mpikambana ao amin'ny The Bahamas, dia mpiasan'ny fiaramanidina mpiasan'ny US Customs and Border Protection, LR: Nathan Butler, Bahamas Customs; Chris Doug, Fiarovana amin'ny fadin-tseranana amerikana; Reginald Saunders, Sekretera maharitra, BMOTA; John Cook, Fiarovana amin'ny fadin-tseranana amerikana; Greg Rolle, Talen'ny talen'ny Verticals Market, BMOTA; Deckery Johnson, BMOTA ary Aram Bethell, BMOTA. Sary natolotry ny BMOTA.
“Tsy isalasalana fa misy fahalianana be amin'ny The Bahamas sy ny fangatahana farany hitsidika ny firenentsika - na avy amin'ny mpitsidika izany, na ny mpanamory fiaramanidina manokana na ny mpandraharaha. Nahazo tombony be dia be izahay amin'ny raharaham-barotra sy ny fivezivezena ataon'ny vondrona hisidina ho any amin'ny nosinay, amin'ity fampisehoana ity, "hoy i Rolle.